12 Hour Shift (2020) | MM Movie Store
၂၀၂၀ ခုနဈထှကျ Drama, Thriller အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ …ဇာတျလမျးအရတော့ မနျဒီက ဆေးရုံတဈခုမှာအစမျးခနျ့ကာလဆငျးနတေဲ့ သူနာပွုတဈယောကျပါသူ့အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးကတော့ ကာရနျပေါ့…သူတို့နှဈယောကျမှာ လြှို့ဝှကျခကျြတဈခုရှိပါတယျ…
အဲဒါကတော့ သူတို့နှဈယောကျဟာ သခေါနီးလူနာတှေ မြှျောလငျ့ခကျြမရှိတော့တဲ့လူနာတှကေို သတျပွီး ကလီစာတှထေုတျရောငျးနကွေတာပါပဲ…တဈညတော့ ကလီစာတှကေို တဈဆငျ့ခံပို့ပေးရတဲ့ရဂျဂြီနာကွောငျ့ ကြောကျကပျတဈလုံးပြောကျသှားတဲ့အခါ….
ရဂျဂြီနာတဈယောကျ လုပျမိလုပျရာနဲ့ ဆေးရုံမှာ ဘယျလိုမှမေလဲဆိုတာ ကွညျ့ရှုခံစားရမှာဖွဈပါတယျ…IMDB 5.3/10 ရရှိထားပွီး မငျးသမီးကွီး Angela Bettis က မနျဒီအဖွဈ ခပျမိုကျမိုကျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။
၂၀၂၀ ခုနစ်ထွက် Drama, Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် …ဇာတ်လမ်းအရတော့ မန်ဒီက ဆေးရုံတစ်ခုမှာအစမ်းခန့်ကာလဆင်းနေတဲ့ သူနာပြုတစ်ယောက်ပါသူ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကတော့ ကာရန်ပေါ့…သူတို့နှစ်ယောက်မှာ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်…
အဲဒါကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သေခါနီးလူနာတွေ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့လူနာတွေကို သတ်ပြီး ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းနေကြတာပါပဲ…တစ်ညတော့ ကလီစာတွေကို တစ်ဆင့်ခံပို့ပေးရတဲ့ရဂ်ဂျီနာကြောင့် ကျောက်ကပ်တစ်လုံးပျောက်သွားတဲ့အခါ….
ရဂ်ဂျီနာတစ်ယောက် လုပ်မိလုပ်ရာနဲ့ ဆေးရုံမှာ ဘယ်လိုမွှေမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်…IMDB 5.3/10 ရရှိထားပြီး မင်းသမီးကြီး Angela Bettis က မန်ဒီအဖြစ် ခပ်မိုက်မိုက်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။